Nandeha fampanoavana ny talata lasa teo, ka nahazo fahafahana vonjimaika ny toriana. Amin’ny 20 jona izao no ho fantatra ny didy. Nivoitra tao anatin’io ny filazana fa mpisoloky i Holijaona Rabaonarijaona izay nivarotra ny tetikasa IEM tamin-dRajoelina. Anisan’ny fototry ny fionganan’ny Profesora Zafy Albert io olon’ny IEM io, raha ny nambarany. Tany amin’ny taona 1994, dia Tale Jeneraly lefitry ny Flamco izy. Fisolokiana goavana indrindra teto Madagasikara nahabankiropitra ny firenena io, raha ny voasoratra. Tetika nakana vola in-telo nisesy manodidina ny 3.4 tapitrisa dolara tao amin’ny BTM (Bankin’ny Tantsaha Mpamaokatra, ka 10.2 tapitrisa, izay tsy nisy antoka mazava. Volabe 4 miliara ariary no nanjavona tamin’ny resaka fitsoahan-ketra nataon’ny Flamco, ary 6 miliara ihany koa ny fatiantoka sy vola fongana tao anaty kitapom-bolam-panjakana… Samy milaza ho mpanohana sy naka ny fon-dRajoelina izy ireo ary nifamoaka tsiambaratelo sy mifanenjika tanteraka.